Chautari Daily » तपाईं कसैलाई प्रेम गर्नु हुन्छ ? २ मिनेट समय निकालेर पढ्नुहोस्
तपाईं कसैलाई प्रेम गर्नु हुन्छ ? २ मिनेट समय निकालेर पढ्नुहोस्
काठमाण्डौ / यो संसारका हरेक व्यक्ति एकजस्ता हुँदैनन् । कसैमा केही कुरा विशेष हुन्छ भने कसैमा केही । कसैको केही विशेषता हुन्छ भने कसैमा केही कमी हुन्छ । तर के तपाईँलाई थाहा छ, राशिका आधारमा तपार्ईं यी भिन्न भिन्न मानिसहरूबिच केही समानता अवश्य पनि देख्नु सक्नुहुन्छ।
तपाईंको राशीः भनाईको अर्थ यो हो कि राशीको आधारमा केही यस्ता कुरा छन् जसमा स्वभाव, चरित्र, रुची, अरुची आदि कुराहरु समावेश हुन्छन् । उदाहरणका लागि यदि तपाईंको राशी कसैसँग मेल खान्छ भने तपाईं यो बुझ्नुहोस् कि केही कुरामा तपाईं र ती व्यक्तिलाई एक समान भन्न सकिन्छ ।
क्लिंगीः यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर आज हामी तपाईंलाई यस्ता राशी र उनीहरुसँग सम्बन्धित मानिसहरु बारे कुराकानी गर्दैछौं जसलाई सामान्य भाषामा ‘क्लिंगी’ वा भावनात्मक रुपले निर्भर मानिन्छ । यी राशी केही यस्ता छन् जो यदि कोहीसँग भावनात्मक रुपमा जोडिन्छन् भने उनीहरुलाई हरेक समय उनीहरुको आवश्यकता हुन्छ ।
टाँसिएर बस्नेः उनीहरु एक पल पनि आफ्ना साथी बिना बस्न सक्दैनन् । थुप्रै पटक उनीहरुलाई टाँसिएर बस्ने व्यक्ति पनि भनिन्छ । यस्तोमा यस्ता कुन राशी छन् जसलाई क्लिंगी वा ‘चिप्कु’ मानिन्छ । उनीहरुको ठूलो कमजोरी यो पनि हुन्छ कि उनीहरु निकै चाँडै आफ्नो अपेक्षा जोड्ने गर्दछन् र जब यस्ता अपेक्षा टुट्छन् उनीहरुलाई निकै दुःख लाग्छ ।
मिथुन राशीः यो श्रेणीमा सबैभन्दा पहिलो नाम छ मिथुन राशी को । मिथुन राशी भएका मानिसहरु यदि आफ्नो कुनै योजना बनाउँछन्, उनीहरु निकै उत्साहित हुन्छन् र सिधै यसको निष्कर्षमा पुगेको सपना देख्न थाल्छन् । उनीहरु आफ्ना साथी र आफ्ना लागि निकै ठूल्ठूला सपना देख्ने गर्दछन्, जुन थुप्रै पटक पूरा गर्न मुश्किल हुन्छ ।
समस्याः तर यदि कुनै कारणवश ती सपनाहरु पूरा नभए उनीहरुलाई निकै तनाव लाग्छ । उनीहरु आफ्नो जीवनसाथी बिना वा उनीहरुबाट टाढा भएर केही पनि सोच्नै सक्दैनन् ।
कर्कट राशीः यदि कुनै व्यक्तिले कर्कट राशी भएकाहरुसँग प्रेम सम्बन्ध निभाउने अवसर पाए बुझ्नुहोस् कि त्यस्ता व्यक्ति निकै भाग्यमानी हुन्छन् । एक विश्वास पात्र र इमान्दार साथी के हुन्छ, त्यो कुरा कर्कट राशी भएका व्यक्तिसँग प्रेम गर्नेलाई थाहा हुन्छ ।
साथीमाथि निर्भरःकर्कट राशी भएकाहरु प्रेमका साथै आफ्नो समस्या, पीडा र गुनासो भन्न पनि निकै राम्रोसँग आउँछ । उनीहरु तपाईंलाई आफ्नो शत प्रतिशत दिने गर्दछन् र तपाईंबाट पनि यसैको अपेक्षा गर्दछन् । कर्कट राशी भएकाहरु पूर्ण रुपमा आफ्ना पार्टनरमाथि निर्भर हुन्छन् ।
उत्कृष्ट जीवनसाथीः घुम्न जान होस् वा कुनै सपिङका लागि । आफ्ना साथी बिना उनीहरुको कुनै योजना बन्दैन । उनीहरु आत्मनिर्भर भइकन पनि आफ्ना साथीप्रति निर्भर हुन्छन् । उनीहरुलाई हरेक समय आफ्ना साथीसँग बस्न मनपर्छ । उनीहरु निकै उत्कृष्ट जीवनसाथी हुनेछन् ।
कन्या राशीः कन्या राशी भएकाहरुलाई निकै लचिलो मानिन्छ । उनीहरु तपाईंको जीवनमा आइपर्ने कुनै पनि समस्याको अगाडि झुक्दैनन् । यसको साटो उनीहरु यसको डटेर सामना गर्दछन् । यदि उनीहरु कुनै सम्बन्धमा छन् भने आफ्नो शत प्रतिशत दिने गर्दछन् । उनीहरुका लागि प्रेमीभन्दा ठूलो अरु कोही पनि हुँदैन ।
निकै क्लिंगीः उनीहरुको ध्यान कहिले पनि आफ्नो प्रेमीभन्दा बाहिर हुँदैन त्यसकारण उनीहरुलाई निकै क्लिंगी मानिन्छ । प्रेमीले के खाइरहेको छ, कोसँग छ, के खाइरहेको छ, कहिले सुत्छ, कहिले उठ्छ… यी सबै कुराको जानकारी हुनुपर्छ । यो स्वभावका कारण उनीहरुको सम्बन्ध धेरै लामो समय टिक्न पाउँदैन।
कुम्भ राशीः कुम्भ राशी भएकाहरुले जसलाई आफ्नो जोडी बनाए, बुझ्नुहोस् ती व्यक्तिलाई उनले जीवनभर साथ दिनेछन् । उनीहरु कुनै पनि हालतमा आफ्नो साथीसँग टाढा भएर बस्न सक्दैनन् । जोसँग उनीहरु भावनात्मक रुपले जोडिन्छन् ती व्यक्तिप्रति सधैं इमान्दार हुन्छ र उनीहरु बिना आफ्नो जीवनको अर्थ देख्दैनन्।
मीन राशीः जुन प्रकारको सम्बन्ध मीन राशी भएका व्यक्तिहरुले आफ्ना पार्टनरसँग राख्छन् त्यो अरु कसैले पनि राख्न सक्दैनन् । उनीहरु आफ्ना साथीको विषयमा निकै केयरिङ र भावुक हुने गर्दछन् । उनीहरुका लागि संसारमा सबैभन्दा महत्पूर्ण व्यक्ति प्रेमी, प्रेमिका वा जीवनसाथी हुन्छन् ।
प्रकाशित मिति २३ मंसिर २०७६, सोमबार ११:१४